Laasqoray01 « LaasqorayNET: Heelo Waa Heelo Laasqoray!
Loading...You are here: Home > Articles by Laasqoray01 - Page 15
Abaaraha Geeska Afrika oo aad looga dayrinayo
By Laasqoray01 / July 6, 2011 / BREAKING SOMALI NEWS! / Comments Off
Wararka ay soo saareen hay’adaha lagu tilmaamo iney gar gaarka baxshaan oo ay ugu horeeyaan Laamaha UNta, OXfam, Save the Children iyo kuwo kale ayaa qeylo dhaan ka jeediyey abaaraha sida xawliga ah uga socoonaya Geeska Afrika ama deegaanada Soomaalidu ee Somalia, Kenya iyo Ethiopia. Qaylo dhaantii ugu danbeysey waxaa soo daayey hay’ada UNCHR iyadoo [...]
By Laasqoray01 / July 5, 2011 / HEADLINES / Comments Off
Mogadishu – Somalia’s newly appointed prime minister said on Monday that fighting corruption and defeating al-Qaeda-linked militants will be top priorities during his term. A recent attempt to clean up Somalia’s weak government and fight militants suffered a setback after a UN-backed deal allowed the country’s president and parliament speaker to oust a popular prime [...]
Dowlada oo sheegtey in Shirka wadatashiga uu Muqdisho ka dhacayo
By Laasqoray01 / July 5, 2011 / BREAKING SOMALI NEWS! / Comments Off
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in la isku afgartay in shirkii wada tashiga ee horay ay u iclaamisay Qaramada Midoobay uu ka dhici doono magaalada Muqdisho waxqti aan la caddeynin. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Maxamed C/laahi Oomaar oo Radio Muqdisho waraysi siiyay ayaa sheegay in ergayga gaarka ah ee arrimaha Soomaaliya u qaabilsan Qaramada Midoobay Dr.Augostine [...]
By Laasqoray01 / July 2, 2011 / BREAKING SOMALI NEWS! / Comments Off
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka KMG ah ee Soomaaliya Mudane Dr. C/weli Maxamed Cali ayaa maanta markii ugu horeysay booqasho ku tegay furimaha hore ee ay ku sugan yihiin ciidamada Dowladda Federaalka KMG ah ee Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa degmooyinka Hodon iyo Howlwadaag. Ra’iisul Wasaaraha ayaa waxaa kormeerkiisan ku wehlinayay R/wasaare kuxigeenka ahna Wasiirka Gaashaandhigga Mudane C/xakiin [...]
By Laasqoray01 / July 2, 2011 / HEADLINES / Comments Off
Somali government forces, supported by peacekeepers from the African Union, say they are making gains in the battle for control of the capital, Mogadishu. Watch the video here Sources- Aljazeera
1da Luulyo oo si weyn looga xusey Magaalada Muqdisho
By Laasqoray01 / July 1, 2011 / BREAKING SOMALI NEWS! / Comments Off
Xaflad aad u ballaaran oo lagu maamuusayay 51-sano guuradii ka soo wareegatay xilligii ay xornimada ay qaateen gobolada Koofureed iyo israacii Gobolada Waqooyi iyo Koofur ayaa caawa waxaa lagu qabtay xarunta Madaxtooyada Qaranka ee Villa Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qeybgalay Kusimaha madaxweynaha ahna guddoomiyaha Baarlamaanka Mudane Shariif Xasan Sh. Aadan, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada [...]
Haybad Waxaad Ku Leedahay Dhulkaaga Hooyo (Daawo Bilicda Duleedka Xingalool]
By Laasqoray01 / June 29, 2011 / BREAKING SOMALI NEWS! / Comments Off
Gobolada dalka Soomaaliya intooda badan ayaa wakhtiyadan dambe waxaa ka jirey abaaro ba’an oo ay la ildarnaayeen dad iyo duunyoba, kadib markii dhowr xilli roobaad aaney helin dhulka roobabkii sida caadiga ah ka di’i jirey. Hadaba xiligan guga ee sanadkan ayaa waxaa da’ay roobab aad loogu diirsaday oo ka da’ay inta badan gobollada soomaaliya, meelaha [...]
Maamulka Faroole oo Baacsanaya Saxaafada Madaxa Banaan Iyo Weriye ay xidheen
Maamulka Faroole ayaa mudooyinkan danbe waxay baacsi iyo caga juglayn ku hayaan saxaafada Madaxa Banaan taas oo ay sabab uga dhigayaan inay faafinayaan warar aanu Faroole raali ka ahayn sida loo tabinayo madaama dhac dhac iyo Maamul xumada Faroole ay batadatay Hadaba waxa marag ma doonto in Faroole damacsan yahay sidii uu xukunka awood ugu [...]
Tababar loo qabtay gudiyada xaafadaha Badhan ora
By Laasqoray01 / June 28, 2011 / BREAKING SOMALI NEWS! / Comments Off
Tababar oo soconayey mudo saddex maal mood ah loona qabtay gudiyada shanta xaafadood ee Deg Badhan ayaa maanta ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan, tababarkan oo ka duwanaa kuwii hore loo qaadan jiray ayaa waxaa soo qaban qaabiyey golaha deegaanka iyaga oo la kaashanay aqoon yahanka iyo culimo aw diinka degmada Badhan. Tababrkan oo gudiyada [...]
URURADA ARDAYDA SANAAG IYO DARAAWIISH OO XUSAY 26- JUNA, MAALINTA XORNIMADDA GOBOLADDA WAQOOYI IYO CALANKA SOOMAALIYA [+SAWIRO]
Khartoum:- Xaflad balaadhan oo lagu xusaayey maalinta 26 June, ayaa ka dhacday hoolka shirarka ee Jamacada Africa ee magaalada Khartoum. Xafladan ayaa waxa soo qaban qaabiyey isla markaan soo bandhigay Labada Urur ee kala ah Ururka Ardayda Sanaag Sudan iyoururka Ardayda Daraawiish,Labadan urur ayaa soo bandhigay xaflad aad loogu bogay, taas oo u jeedadeedu aheyd sida [...]